Nataon'ny Goverinora RAFIDISON Richard laharam-pahamehana ny fanatsarana ireo lalana mampitohy ny toeram-pizahantany.
Vita tanteraka ny lalana mampitohy ny RN2 amin'ny tanànan'ny Manambato, ka vokatr'izany dia hisitraka tosika sy tantsoroka avy amin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy ny Faritra Atsinanana ireo mpandraharaha ara-pizahantany any an-toerana, ka ho hisy amin'io "vacances de Toussaint " ho avy io ny tolotra fihenambidy ahafahana miala sasatra sady mijery ny hakanton'ny Canal de Pangalanes, lac Rasoabe, lac Rasoamasahy, ary ny ao amin'ny Akanin'ny nofy.
Vita latsaky ny 30 minitra ny lalana amin'izao raha adiny iray sy sasany teo aloha ny lalam-pirenena faharoa mihazo ny village touristique MANAMBATO (Canal des Pangalanes, lac Rasoabe, lac Rasoamasahy, Akanin'ny nofy).
lundi, 18 octobre 2021 08:17
Fantatrao ve : Inona no antsoina hoe procédures collectives d’apurement du passif
Nalaza moa tatoato ny olana misy eo amin'ny Orinasam-panjakana, toa ny Air Madagascar, izay nanapahan'ny Filan-kevitry ny minisitra fa hiditra amin'ny "procédures collectives d’apurement du passif".
Tsara ho fantatra aloha, fa ny Orinasa dia toy ny olombelona, personne physique, izay teraka (création entreprise), ka omena Taratasim-pahaterahana na soram-piankohonana, ahitana ny ray amandreny niteraka azy na Associés, ny daty nahaterahany - NIF sy STAT, ny toerana onenany na siège, ny lanjany na Capital, na ny petra-bola voalohany iainana sy hividianany fananany.
Io no antsoina hoe Personne morale.
Afaka manokatra compte en banque izy izany, afaka mividy entana, mamokatra, ary mivarotra entana, afaka mividy sy manana ny fananany izay misoratra aminy, ary afaka miteraka izy, filiale, afaka manambady izy na manao fifanaraham-piarahamiasa amin'ny société hafa.
Mandoa hetra izy, ary manaraka ny fepetra rehetra momba izany.
Afaka amidy izy, ary azo lovaina.
lundi, 18 octobre 2021 07:31
ISTM Ankadikely Ilafy : Ny fahitan'ireo tanora mpianatra informatika ny fihaonana sy fifampizarana ny zoma 15 oktobra 2021
Misy tatitra kely mba tiako atao aminao satria raha tafahaona tamin’ny mpianatra izao io maraina io dia nametraka fanontaniana vitsivitsy tamin’izy ireo :
« Marihiko dieny ety ampian-dohana fa izay valiteny hitanao eo ambany dia tsy fehezan-teniko fa ny an’ny mpianatra no hoaveriko aminao ».
Fanontaniako : Nampoizinareo ve ny vahinintsika?
-tena tsy nampoizinay mihitsy
-tsy nampino anay mihitsy hoe mety hahita olona toy ireny izahay (Olona mpandeha amin’ny télé, olo-malaza, Mpanao politika)
-Tsy nampoizinay hoe afaka manao paozy tsotsotra toy ireny ireny olona ireny , izahay indray no toa nizesita.
Fanontaniako: Tianareo ve ilay resaka nataon’ilay olona sa tsia?